Fitness - Tsy mampino Mag
Suwit Muay Thai ho an'ny fanatanjahan-tena any Thailandy dia fanatanjahan-tena tena tsara
Nandritra ny taona maro dia nanandrana namoy lanja ny olona, ​​ary fomba maro samihafa no nampiharina. Ny sasany amin'izy ireo dia fironana nandritra ny taona maro, ary na dia mino azy aza ny olona dia nahazo valiny zero. Sakafo no naka an-tanana ny indostria, saingy rehefa…
Inona no mampiavaka ny SARM?
Ny SARMs na Selective Androgen Receptor Modulator dia zava-mahadomelina manatsara ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina izay iray amin'ireo tsiambaratelo momba ny fanatanjahan-tena Gym bodybuilding ankehitriny sy ankehitriny. Izy ireo dia tena mitovy amin'ny steroid fa tsy misy fiatraikany amin'ny taolana sy ny hozatra nahatonga azy…
Fiofanana hanovana ny vatanao
Ny vatan'olombelona dia manana fahaizana mahatalanjona mampifanaraka ny ankamaroan'ny karazana fihenjanana. Rehefa dinihina tokoa, ireo fampifanarahana ireo no ahafahantsika mahazo tanjaka, manangana fiaretana ary mampihena ny lanjantsika! Amin'izay voalaza izay, manao ireo fanazaran-tena mitovy hatrany hatrany…
Boxing Thai amin'ny fialantsasatra
Ahoana no tianao fivezivezena? Ny ankamaroan'ny olona dia tokony hamaly ity fanontaniana ity amin'ny filazany fa tena ho tia mandehandeha bebe kokoa amin'ny fiainany izy ireo. Ary misy antony marim-pototra. Tsy tambo isaina ireo tombontsoa samihafa iainan'ny olona rehefa mitety faritra…
Fomba ahazoana hoditra tanora kokoa
Rehefa mihantitra ianao dia ny hoditrao no zavatra voalohany hiova. Ary na dia ampahany voajanahary amin'ny fitomboan'ny fahanterana aza ny ketrona, maro no mitady ny fomba ahafahany mitahiry ny hodiny tanora ary mitazona azy ho salama kokoa. Aorian'ny…
Ny fivontosan'ny atidoha sy ny sandan'ny fandidiana azy
Ny atidoha sy ny fikambanany Ny atidoha dia iray amin'ireo taova lehibe indrindra misy amin'ny vatan'olombelona. Ny ati-doha no tena mandrindra ny vatana. Ity taova ity dia miorina eo afovoany ambony indrindra amin'ny vatan'olombelona mifandrindra avy etsy ambony. Tsirairay sy…
Ny fahalalana ny vokany ratsy mba hitazomana am-pitandremana ny fizika
Ny antso an-tsary dia mety hiteraka fahatsapana voalohany izay mety ho tsy hay hadinoina na tsy fantatra. Ny ankamaroan'ny olona dia tia manaitra ny hafa amin'ny vatany matanjaka voakarakara tsara. Ny vatana rovidrovitra miaraka amin'ny hozatra manaitra dia mety hampivarina sy handrisika azy ireo hahazo…
Ahoana ny fomba fanatanjahan-tena sy ny sakafo mahavelona mety amin'ny fahazarana isan'andro
Ny fitazonana fomba fiaina mahasalama sy mavitrika dia tokony ho iray amin'ireo laharam-pahamehanao indrindra. Ny fitandremana ny tenanao ihany no ahafahanao manana olona ezahinao hahatongavana, na ao an-trano izany na any amin'ny birao. Na izany aza, tsy mbola…